मादक पदार्थ सेवन र नकरात्मक प्रभाव::Online News Portal from State No. 4
मादक पदार्थ सेवन र नकरात्मक प्रभाव
मादक पदार्थ वा रक्सीको सेवनले स्वस्थ्यमा खराव असर पर्छ भन्ने त सबैलाई थाहै छ । यसबारेमा धेरै बताईरहनु पर्दैन । नियमित मदिरा सेवनले शरीरमा ठूला–ठूला रोग लाग्ने गरेको तपाँई हाम्रो आँखाले देखेकै छ । मदिराको सेवनले कलेजोलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ । दैनिक मदिरा सेवन गर्नाले मुखमा क्यान्सरको सेल बढाउँदै जान्छ । जसले मुखमा क्यान्सर हुने खतरा बढ्दै जान्छ । मदिराले घाँटीको क्यान्सर पनि हुन्छ । लामो समयसम्म मदिरा सेवन गर्ने बानीले घाँटीको क्यान्सर मात्र होइन, रगत बान्ता गर्ने समस्या समेत देखिन थाल्छ । मदिरा सेवनले ‘लिभर डिजिज’ अर्थात् कलेजोको संक्रमण गराउँछ । कलेजोको सुरक्षाका लागि मदिरा सेवन खतरनाक मानिन्छ । निरन्तर मदिरा सेवनका कारण कलेजो ड्यामेज नै हुन सक्छ । दैनिक मदिरा सेवनले शरीरको रक्तसञ्चार बिगार्छ । परिणाम ब्रेन स्ट्रोकको खतरा बढ्दै जान्छ ।
मदिराले मुटुमा पनि असर पार्छ । मुटु मानव शरीरको अति संवेदनशील अंग हो । शरीरमा मदिराको मात्रा बढ्दै गयो भने रक्तसञ्चारको गति पनि तीव्र हुन्छ । हर्ट डिजिज हुने सम्भावना अत्यन्त बढी हुन्छ । उच्च रक्तचापका कारण कुन समयमा मानिस मृत्युनजिक पुग्छ भन्ने टुंगै हुँदैन । नियमित मदिरा सेवनका कारण निम्तिने अर्को रोग उच्च रक्तचाप पनि हो । ३० एमएल मदिरामा एक सय क्यालोरी हुन्छ । लिमिटभन्दा बढी मदिरा सेवनले क्यालोरीको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ । यति मात्र होइन, मदिरा सेवनले ब्रेनमा डोपामाइन हर्मोन उत्पादन गर्छ । डोपामाइनको बृद्दीको कारण तीव्र गतिमा रक्तसञ्चार बढ्न थाल्छ । जसको कारण रक्तचापको लेभल बढ्दै जान्छ । मदिराले मुटुको कम्पनलाई समेत बढाउँछ । रगतमा असर पर्दै जाँदा रगतमा चिनीको मात्रा पनि कम हुँदै जान्छ । फलस्वरूप आँखा धमिलो हुने समस्या देखा पर्छ । शरीरमा मदिराको मात्रा बढ्दै जाँदा कार्टिसोल हर्मोनको मात्रा पनि बढ्छ र तनावलाई बढाउँदै लान्छ ।
रक्सीले शरीरमा कस्तो असर गर्छ ?
लामो समय सम्मको रक्सीको प्रयोगले शरीरमा पार्न सक्ने समस्याहरुः
१. कलेजो (Liver): Steatosis or fatty liver, Alcoholic hepatitis, Fibrosis, Cirrhosis २. दिमाग (Brain): रक्सि पिएको केहि क्षणमै देखा पार्ने समस्याहरुः शरीरमा (रगतमा) रक्सीको मात्रा लगभग BAC 0.02% देखि 0.2% जति पुग्दाः दृष्टिमा समस्या, नजिक र टाढा छुट्याउन गाह्रो, उठेर राम्रोसंग हिड्न गाह्रो आवस्येक सहि निर्णय गर्ने वा इच्छा, चाहना, मुर्खयाई आदिलाई नियन्त्रणमा राख्ने दिमागको भागले काम गर्न छाड्ने, यिकक या inhibition: शरीरमा (रगतमा) रक्सीको मात्रा लगभग BAC 0.2% भन्दा माथि भएमा उभिन नसक्ने, कपडामै पिसाब फेर्ने, बान्ता गर्ने र बान्ता फोक्सो (गिलन) मा पस्ने, स्वासप्रस्वासमा समस्या, Low Blood Sugar, Low B.P, अचेतन अवस्था (Coma), मृतु (death) दिमागमा हुने रक्सीका दिर्घ समस्याहरुः पुराना कुरा बिर्सने समस्या, नया कुरा (new memory) दिमागमा राख्न नसक्नु, मानसिक समस्याहरुको उत्पत्ति (जस्तै निन्द्रामा गडबडी, झर्केने, आतिने, झट्टै उदाशीन हुने समस्याहरु, मनोविकृति (Psychosis)
३.मुटु (Heart): Cardiomyopathy, Arrhythmias, High blood pressure
४.अन्य समस्याहरुः Pancreatitis, Gout, Gastritis, Impotence, रोग संग लड्न सक्ने क्षमतामा कमि (Lose of immune system) जसले गर्दा निमोनिया वा अन्य सामान्य रूघाखोकी जस्ता समस्यहरूलाई तत्काल र लामो समय संमअसर गर्ने र अन्य सरूवा रोगहरुले सजिलै लामो समय ग्रस्त पार्ने हु्न्छ ।
अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने मानिसमा मुखको क्यान्सर भएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । अमेरिकामा अल्कोहल सेवन गर्ने, नगर्ने र कम मात्रामा गर्ने १० हजार जनामा अनुसन्धान गरिएको थियो । नियमित अल्कोहल पिउने मानिसमा क्यान्सर, हृदयाघात, मस्तिष्क, कलेजो, पाचन प्रणालीसम्बन्धी रोगको जोखिम हुन्छ । अनुसन्धानले रक्सी खाने मानिसमा मुख क्यान्सरको सम्भावना अत्याधिक हुने पत्ता लगाएको छ । अल्कोहलले पाचन प्रणाली र फोक्सो क्यान्सरको सम्भावना पनि अत्यधिक रूपमा बढाउँछ । अत्याधिक अल्कोहल सेवन गर्ने मानिसको आकस्मिक मृत्यु हुने गरेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । सामान्य मानिसभन्दा बढी अल्कोहल सेवन गर्ने मानिसमा उच्च रक्तचापको सम्भावना पनि अत्याधिक हुने गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । अल्कोहलिकहरू मधुमेह, मुटुरोगलगायतका समस्याबाट पनि ग्रसित हुन्छन् । अत्याधिक अल्कोहल पिउने व्यक्तिमा मानसिक समस्याको जोखिम पनि उत्तिकै हुने गर्छ । मानिसले तनाव कम गर्ने निहुँमा अल्कोहलको सहायता लिने गर्छन् । तर, समस्या के भने यसले मस्तिष्कलाई नै अत्याधिक असर पार्ने गर्छ ।
सवारी दुर्घटनाका धेरै कारणमध्ये मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु मुख्य हो । मादक पदार्थ सेवनले सडक दुर्घटना निम्त्याउन रक्सिको नशाले चुर हुनैपर्छ भन्ने छैन । अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने मादक पदार्थको मात्रा शरीरमा जति बढ्छ त्यही अनुपातमा सवारी दुर्घटनाको सम्भावनामा वृद्धि हुन्छ । बेलायतमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन रगतमा मादक पदार्थको माथिल्लो सीमा ८० मिलिग्राम प्रतिएक सय मिलिलिटर, पिसाबमा १०७ मिलिग्राम प्रतिएक सय मिलिलिटर र सासमा ३५ माइक्रोग्राम प्रतिएक सय मिलिलिटर तोकिएको छ । तोकिएको माथिल्लो सीमाभन्दा बढ्ता पाएको खण्डमा घटीमा एक वर्षसम्म सवारी चलाउन नपाउने र कसुर हेरेर GBP £ ५००० सम्म दस्तुर र ६ महिनासम्म कैद पनि गर्न सकिने प्रावधान छ ।
मादक पदार्थ बिल्कुलै सेवन नगरी सवारी चलाउने व्यक्तिको तुलनामा मादक पदार्थले एकदमै असर पार्ने र नयाँ चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा मादक पदार्थको मात्रा रगतमा ८० मिलिग्राम, १०० मिलिग्राम र २०० मिलिग्राम प्रतिएक सय मिलिलिटरमा सवारी दुर्घटना हुने यो सम्भावना क्रमशः ५, १० र २० गुणा बढी हुन्छ । तर मादक पदार्थले त्यति असर नपार्ने वा अनुभवी सेवनकर्ता र अनुभवी चालकको हकमा तुलनात्मक हिसाबले सवारी दुर्घटना हुने सम्भावना ८० मिलिग्राममा २ गुणा, १०० मिलिग्राममा ५ गुणा र २०० मिलिग्राममा १० गुणा मात्र बढी हुन्छ । यसरी विभिन्न व्यक्तिलाई मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा विभिन्न किसिमले नकारात्मक असर पार्ने भए तापनि यसले धेरथोर सबैलाई नकारात्मक असर पार्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सवारी चलाउनका लागि मादक पदार्थको तल्लो सुरक्षित सीमा ‘सेफ लोवर लिमिट’ हुँदैन र सबैभन्दा सुरक्षित सीमा भनेको नै मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउनु हो ।
हाम्रो शरीरबाट प्रतिघन्टा करिब आठ ग्राम मादक पदार्थ (एक पेग ह्विस्की वा आधा बोतल बियर वा एक गिलास वाइन वा एक गिलास सेरी) बाहिर फाल्ने काम हुन्छ । खाली पेटमा स्नाक्सबेगर एक गिलास बियर स्वाट्ट पिएमा रगतमा मादक पदार्थको मात्रा चाँडै नै ३० मिलिग्राम प्रतिएक सय मिलिलिटर पुग्छ । यसरी नै ४ गिलास बियर वा ४ गिलास वाइन वा ४ पेग ह्विस्की पिएमा रगतमा मादक पदार्थको मात्रा चाँडै नै १२० मिलिग्राम पुग्छ । यसलाई शरीरबाट बाहिर फाल्न शरीरलाई ४ घन्टा लाग्छ । तसर्थ कसैले राती अत्याधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गरेमा भोलि बिहानसम्म पनि उसको रगतमा मादक पदार्थको मात्रा ८० मिलिग्राम प्रतिएक सय मिलिलिटरभन्दा पनि ज्यादा हुन सक्छ । महिलाहरूको शरीरको तौल पुरुषहरूको तुलनामा औसतमा कम भएकाले र महिलाहरूको शरीरमा तुलनात्मक हिसाबले बोसोको मात्रा पुरुषहरूको भन्दा ज्यादा हुने भएकाले समान मात्रामा मादक पदार्थ पिउँदा पनि महिलाहरूको रगतमा तुलनात्मक हिसाबले मादक पदार्थको मात्रा ज्यादा हुन्छ र महिलालाई यसले ज्यादा नकारात्मक असर पार्छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन सक्ने धेरै कारण छन् । मादक पदार्थले झूटो आत्मविश्वास बढाई जोखिममा होमिने सम्भावना बढाउने, सवारी चालकमा सवारी राम्ररी नचलाएका बेलामा पनि राम्ररी चलाएको अनुभव हुने, मादक पदार्थले चालकलाई आवेशयुक्त बनाउने, सवारी चलाउँदा विभिन्न मांसपेशीहरू र विभिन्न प्रणालीहरूबीच हुनुपर्ने समन्वयमा नकारात्मक असर पार्ने, अवस्थाअनुसार हाम्रो शरीरमा स्वचालित हुनुपर्ने प्रक्रिया ‘रिफ्लेक्स एक्सन’ मा ढिलाइ हुने, फिल्ड अफ भिजन साँघुरो हुन जाने, विभिन्न रङ र त्यसमा पनि रातो रङ छुट्याउन सक्ने क्षमतामा कमी आउने, वस्तुलाई केन्द्रित गरी हेर्ने र त्यो वस्तुलाई आँखाले पछ्याइरहन सक्ने क्षमतामा कमी आउने, रङजस्तै विभिन्न प्रकारका आवाजलाई छुट्याउन सक्ने क्षमतामा पनि कमी आउने, सवारीको गति र दूरीअनुसार समय अडकल गर्न सक्ने क्षमतामा कमी आउने, सवारी धेरै गतिमा जाँदा पनि कम गतिमा गएको अनुभव भई अरू तीव्र गतिमा चलाउने सम्भावना हुने र एकदमै उज्यालो हेरेर आँखाको दृष्टि पहिलेको अवस्थामा आउन समय बढी लाग्न जानाले दुर्घटनाको खतरा रहन्छ । अमेरिकामा सन् १९८२ मा सडक दुर्घटनामा मर्नेको संख्या ४३,९४५ थियो जसमध्ये ६० प्रतिशत मादक पदार्थ सेवन नै थियोभने २००७ मा सडक दुर्घटनामा मर्नेको संख्या ४१,०५९ अर्थात् ३७ प्रतिशतमा झ‍¥यो । सवारी दुर्घटनाको रोकथामका लागि धेरै कदम कडाइसाथ चालिएकाले यो घटेको हो । सवारी दुर्घटनाका विभिन्न रोकथामका उपायका साथै नियमित ब्रेथलाइजर प्रयोग गरी सवारी चालकहरूमा मादक पदार्थको जाँच गरिए दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिनेछ ।
रक्सी छाड्न लगाउनु अगाडी ध्यान दिनुपर्ने कुरा
लामो समयसम्म अत्याधिक मात्रामा रक्सीको सेवन गरेको मानिसले झट्ट रक्सी रोक्दा हात खुट्टा थर थर काँप्ने, आत्तिने, पसिना आउने, मुटुको धड्कन बढ्ने, भित्रैदेखि डर लाग्ने, निन्द्रा बिग्रने, बान्ता आउला जस्तो हुने लगाएत होसै हराए जस्तो, भ्रमित भएजस्तो र Seizure समेत हुन सक्छ । यस्तो अवस्थालाई Alcohol बाट withdrawal भएको भनिन्छ । महिनौं दिनसम्म लगातार दिनरात रक्सी खाएकाले झट्ट रक्सी रोक्दा उचित उपचार तत्काल भएन भने ज्यानै पनि जान सक्छ । त्यसैले यो बेलामा alcohol withdrawal बारेमा जानकार स्वास्थ्यकर्मी (Health Care professionals) को प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गर्नुपर्छ । यस उपचारको अबधि ५–७ दिनसम्म हुन सक्छ । यस्तो alcohol withdrawal को उपचार गर्दा विभिन्न किसिमको benzodiazapines औषधिको प्रयोग गरिन्छ । यो औषधि डाक्टरको prescription बिना पाइदैन ।
तत्कालको Alcohol withdrawal बाट बंचाएपछि दिर्घकालिन उपचारको लागि (Treatment for remission) यो बेलामा यस्तो औषधिको प्रयोग गरिन्छ जसले रक्सि खान मन नलाग्ने वा खाएपनि रक्सीको पूर्ण मजा लिन नसक्ने वा रक्सि खाँदा शारीरिक समस्या आउने कारणले थप रक्सि खान नसक्ने खालको स्थितीको सिर्जना गर्छ । साथै व्यक्तिले लामो समयसम्म रक्सि खाएर मुटु, दिमाग, कलेजो, प्रतिरक्षा प्रणाली आदिमा गरेको हानी नोक्सानीको उपचार पनि साथै गरिन्छ । लामो समयसम्म ठुलो मात्रामा रक्सी खाने मानिसले (alcoholic) ले समयमा खाना खाएका हुँदैनन् । खानाबाट पाउने पौष्टिक तत्व (calories, electrolytes, vitamins, etc) रक्सीको calories ले पूर्ति गर्छन् । यस कारणले शरीरको सम्पूर्ण अंग सुक्दै जान्छ । मांशपेशी र हाडरजोर्नीहरू कमजोर हुँदा शरीरका महत्वपुर्ण अंगहरु थाक्दै जान्छन्, राम्रोसंग संक्रिय रूपमा आफ्नो कार्य गर्न सक्दैन ।